साबधान ! के तपाईको पिसिआर रिपोर्ट सक्कली छ? नक्कली पिसिआर रिपोर्ट तयार पारेर दुई घण्टामै घर–होटलमा पु-याउने यस्तो गिरोहको खुलासा – Sapana Sanjal
April 23, 2021 124
Sapana Sanjal : कोरोना परीक्षणको पिसिआर रिपोर्ट घण्टाघण्टामा बन्न कसरी सम्भव छ, सक्कली हो कि नक्कली हो हेर्नुप¥यो”, यही बाक्य बोल्दै महानगरीय अपराध महाशाखामा एक व्यक्ति आइपुगे । उक्त शङ्कास्पद कुरा सुनेपछि महाशाखाको ध्यानाकर्षित भयो । प्रहरीले तत्कालै विशेष टोली तयार पारेर अनुसन्धानमा खटायो । खटाएको एक हप्ताको अपरेशनमा कैफियत फेला परेपछि मङ्गलबार प्रहरीले काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट आठ जनालाई पक्राउ ग¥यो । उक्त नक्कली धन्दामा सुरिया हेल्थकेयर प्राली र मेरिट मल्टिकेयर मेडिकल सेन्टर संलग्न रहेको पाइएको छ ।
स्वाब स,ङ्कलन गरेर रिपोर्ट तयार पार्न सामान्य प्रक्रिया गर्दा पनि केही घण्टा लाग्छ । यती छिट्टै रिपोर्ट बनाएर घरमै पु¥याउने भएपछि शङ्का लागेर अनुसन्धान शुरु गरेको खापुङले बताउनुभयो ।
एक हप्ताको अनुसन्धानले उनीहरुको गतिविधि पुष्टि भयो । उनीहरु पक्राउ परेका हुन् र मुख्य गरी उनीहरुले हवाई यातायात प्रयोग गर्नेलाई केन्द्रित गर्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई यसरी बढी नक्कली रिपोर्ट बनाइएको फेला परेको छ । आज मात्रै प्रहरीले त्यस्ता नक्कली रिपोर्ट बोकेर विदेश जान लाग्ने १७२ यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ पनि गरिसकेको छ ।
प्रहरीका अनुसार स्वाब सङ्कलन गर्ने एउटा समूह छुट्टै दलालका रुपमा प्रयोग भएको पाइएको छ ।
“कतिपयको स्वाब नै नलिइ बनाइदिने र कतिपय नेगेटिभ आएका मान्छेको स्वाब लगेर रिपोर्ट तयार पार्दा रहेछन्”, एसएसपी खापुङले थप्नुभयो, “स्वाब नै अर्कै मान्छेको हालिदिने ।” प्रहरीका अनुसार उनीहरुले लामो समयदेखि उक्त नक्कली धन्दा गरेको हुनसक्ने आशङ्कामा अनुसन्धान जारी राखिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले १२२ जनालाई भित्र बोर्डिङ पास लिएर जाँदै गर्दा पक्राउ गरिएको र थप ५० जनालाई विमानस्थल जाँदै गर्दा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकामा ६८ भारतीय, दुई पाकिस्तानी र १०६ नेपाली छन् । सलाम एयर, जजिरा एयर र एयर अरेबियाबाट उनीहरु विभिन्न मुलुक जाँदै थिए । ती समूहले रु नौ हजार पैसा लिएर पिसिआरको प्रमाणपत्र बनाइदिएको फेला प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
प्रहरीले मङ्गलबार सिनामङ्गलमा रहेको सुरिया हेल्थकेयर प्रालीबाट जारी भएका स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण नै नगरी पिसिआर टेष्ट नेगेटिभ भनी उल्लेख भएका चार थान रिपोर्ट फेला पारेको थियो ।
त्यसपछि नक्कली धन्दा बाहिर आएको हो । यसअघि पनि पटकपटक यस्तो सुनिएको र केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि यती धेरैमात्रामा गिरोह सक्रिय छन् भन्ने कुरा भने बल्ल मात्रै बाहिर आएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त समूहले यसअघि पनि धेरैलाई यसैगरी नक्कली काम गरेर पैसा असुलेको प्रहरीको आशङ्का छ ।
Prevसुन्दा अचम्म लाग्ला तर यो सत्य हो, पल शाहले गरे विबाह ! को हुन् त बेहुली? (भिडियो सहित)
Nextमुख्यमन्त्री राईको श्रीमती दावी गर्दै आएकी बालिका खड्का फेरी राईलाई भेट्न एमाले मुख्य कार्यालयमै पुगेपछि